Gaadiid lagu wareejiyay Xafiiska Ra’iisul wasaaraha dalka – Radio Muqdisho
Gaadiid lagu wareejiyay Xafiiska Ra’iisul wasaaraha dalka
Gaadiidkan deeqda ah oo tiradoodu tahay 5 gaari ayaa waxaa hay’adda Horumarinta Barnamijyadda u qaabilsan Qaramada Midoobay oo magaceeda loo soo gaabiyo UNDP ku wareejisay mas’uuliyiinta xafiiska Ra’iisul wasaaraha dalka,waxaana munaasabadii wareejinta gaadiidka goob joog ka ahaa Wasiiru dowlaha Xafiiska Ra’iisalwasaraha Soomaaliya iyo Xoghayaha joogtada ah ee Xafiiska Ra’iisal wasaraha dalka.
Gadiidkan ayaa loogu talagayey in uu kaalin ka qato dardargalinta howlaha xafiiska uu u hayo Shacabka Soomaaliyeed sida ay sheegeen mas’uuliyiinta UNDP oo goobta ka hadlay.
Bari Grafil ERIS,oo ah madaxa hay’adda UNDP ayaa sheegay in gaadiidkan maanta ay ku wareejiyeen Xafiiska Ra’iisul wasaaraha dalka ay qeyb ka tahay taageerada ay siinayaan dowladda Soomaaliya.
Maxamed Cali Nuur xoghayaha joogtada ah xafiiska Ra’iisal wasaraha Soomaaliya ayaa kaga mahad celiyey Hay’adda UNDP gadiidkani ay maanta ugu deeqday xafiiska Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Wasiiru dowlaha Xafiiska Ra’iisalwasaraha Soomaaliya Cabdiraxmaan Kulmiye Xirsi (Cabdiraxmaan Dheer) oo isna dhankiisa warbaahinta la hadalay ayaa xusay in gadiiskan uu kaalin ka qadanayo horumarinta iyo fududeynta shaqada xafiiska isla markaana looga bahan yahay hay’da in sii wadaan taageerada horumarineed oo Qaramada Midoobay siiso Soomaaliya.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ka qeybagay shirk u saabsan Nafaqeynta Hooyada iyo Dhallaanka”SAWIRRO”